NextMapping | 8 Siyaabaha Hogaamiyayaashu U Shaqayn Karaan Shaqaalahooda Si Ay Ugu Wanaagsanaadaan Waqtiyada Xasilooni darrada
8 Siyaabaha Hogaamiyayaashu U Shaqayn Karaan Shaqaalahooda Si Ay Ugu Wanaagsanaadaan Waqtiyada Xasilooni darrada
Waxaa jira 8 qaab oo ay hoggaamiyeyaashu ku taageeri karaan shaqaalahooda si ay ugu guuleystaan ​​wakhtiyada ay jirto kalsooni darro.
Dhawaan macmiil ayaa la wadaagay inay ku dhibtoonayso inay xubnaheeda ka mid ahaato. Waxay kaloo la wadaagtay in shaqaalaheeda lagu loolamayay inay ahaadaan kuwa diiradda saaraya sidoo kalena wax soo saar leh.
Ma jiro buug loo ciyaaro oo si guul leh loola tacaalo dhammaan fowdada, khalkhalinta iyo isbedelada ay masiibada ku abuurtay.
Si kastaba ha noqotee, waxaan diirada saari karnaa 'dadka marka hore' waxaanan taageeri karnaa dadka waqtigaan adag.
Noqo mid leh mid joogto ah hal kulan oo lala yeesho xubnaha kooxdaada ha ahaato mid ku dhow ama bulshada ka fog xafiiska. Marka la helo shax kale oo ka socda kulamada lala yeesho xubnaha kooxda waxay muujineysaa degenaansho iyo wax ay xubnaha kooxda 'isku halleyn karaan'.
Mid ka mid ah hal kulan ayaa diiradda lagu saaray wanaagga xubnaha kooxda. Weydii "Sidee wax u qabtaan adiga shaqsi ahaan iyo xirfad ahaanba?". Xusuusi khayraadka ay shirkaddaadu haysato sida maalmo fasax qaadashada, gaarista kaalmada shaqaalaha ama wixii kheyraad ah ee ay shirkaddaadu siiso wanaagga shaqaalaha. Adigoo diirada saaraya fayo qabka shaqaalaha adiga hogaamiye ahaan waxaad muujineysaa inaad xanaanayso iyo inaad tahay il aamin ah.
Kordhin isku xirnaanta haddii kooxda inteeda badan ay meel fog ka shaqeynayaan. Shaqaale badan ayaa aad u badan ama ka maqnaa xafiiska xafiiska shaqada. Kooxahan fogfog waxay u baahan yihiin hoggaamiyeyaasha inay si joogto ah ula xiriiraan oo ay u soo mariyaan Zoom ama Skype ama nidaamyada kale ee fiidiyowga.
Shirkado badan ayaa aadey ama tagaya qaab 'hybrid' ah oo shaqeynaya. Macaamiishayada Waxay dhiseen shaqo fog iyo qorshayaal xafiis iyagoo wata jadwallo rogrogmi kara. Tilmaamaha 'Covid' ayaa ah in la hubiyo fogeynta bulshada taasoo micnaheedu yahay in shirkado badani ay leeyihiin 50% xoogagga shaqada xafiiska iyo 50% meel fog ka shaqeeya qiimeynta.
Iyada oo loo wareejiyo inbadan shaqo fog sida caadiga ah ee cusub waxa jira baahi kordhaysa oo loo qabo wada-xiriir aad u cad oo ku saabsan himilooyinka, yoolalka, warbixinta iyo la socodka waxqabadka. Hogaamiyaasha aan hada aad uga careysanahay hada waa kuwa aan u dejin jirooyin cad oo ku saabsan KPI ama cabirka waxqabadka ee shaqaalaha fog. Dhawaan waxaan ka caawinay macmiil si uu ugu tababarto xubnaheeda kooxda qiimeynta lambarada iyo raadraaca heer ka sarreeya cudur-faafa.
Waqtiga maalgelinta tababarka, tababarka iyo horumarka shaqaalahaaga. Ku dhiiri geli shaqaalaha inay waqti ku qaataan maalin kasta si ay u sahamiyaan barashada isla markaana u dhisaan xirfadaha meelaha ay xiiseynayaan.
Iska daa wax kasta oo xaddidan waxaad rumeysan tahay hoggaamiye ahaan haddii shaqaalahaagu 'runtii' shaqeynayaan. Si kale haddii loo dhigo, hoggaamiyeyaashu waxay u baahan yihiin inay 'aaminaan' xubnaha kooxda. Qof macmiil ah oo la wadaagey xiligii la qorsheeyay macalinku ila soo xiriiray ayaa ilala hadlay in si cad ay ugu dhawaaqaan 'tirooyinka' kooxdeeda isla markaana ay usheegtay in kasta oo ay diiradda saarayaan natiijooyinka aysan ku xirneyn 'sida' ay ku guuleystaan ​​natiijooyinkaas. Waxaan ka wada shaqeynay tan dhowr bilood markii ay ku dhibtooday 'aaminaad' in shaqada runtii la qabtay. Sababtoo ah waxay awood u yeelatay inay la socoto lambarada waxay 'ku aamini kartaa' lambarada sidaa darteedna waxay ku aamineysaa xubnaheeda.
Markaad dareento jahwareer hoggaamiye ahaan ama aad dareento inaad la dhibtoonayso fiiro gaar u yeelo heerarka walaacaaga ee kuu gaarka ah. Miyaad naftaada u kobcinaysaa oo naftaada u dhaqaajin doontaa adoo waqti u baahan naftaada? Ma ka jawaab celineysaa dabeecadaha kooxda iyo / ama si fudud ayaa laguu kiciyaa? Ma ka helaysaa taageero / latalin hoggaamiyahaaga? Ma waxaad diirada saareysaa sidii aad waxbadan uga baran laheyd inaad noqoto hogaamiye wanaagsan? Sida ugufiican ee aad u taageeri kartaan kooxahaaga waa adiga inaad iskaashiga u sameysid daryeel iskaa ah, inaad ku daydo inaad salka ku heyso iyo inaad tusaale u noqotid adkeysiga inta lagu jiro waqtigan adag.
Marabtaa inaad hesho ilo badan oo ku saabsan sida loo horseedo isbeddelka, hal-abuurka iyo soo jiidashada iyo u haynta dadka? Eeg koorsooyinkayada internetka iyo waqtigayaga xadidan ee helitaanka koorso BILAASH ah.